[ Oct 18, 2017 ] कांग्रेसले टुंगो लगायो शीर्षनेताको चुनाव क्षेत्र
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले शीर्षनेताहरुको निर्वाचन क्षेत्र टुंगो लगाएको छ । संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरु चुनाव लड्ने क्षेत्र टुंगो लगाएको हो । कांग्रेस स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट चुनाव…
[ Oct 18, 2017 ] चन्द्रागिरिवासीको प्रश्न - धुँलो अति भो, खाने कति हो ?
काठमाडौं । कलंकी नागढुङगा सडक निर्माण ढिलो हुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त भएको भन्दै स्थानीयले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तीन वर्षदेखि निर्माणाधिण अवस्थामा रहेको सडकको काम अझै सम्पन्न नहुँदा बल्खु पुलदेखि कलंकीसम्मका नागरिकलाई सास्ती…
[ Oct 18, 2017 ] चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशबाट पारित गर्ने सहमति
डा. गोविन्द केसीले माग गर्दै आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसहित सरकारी वार्ताटोली तथा केसी वार्ताटोलीबीच बुधबार बिहान भएको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
[ Oct 18, 2017 ] को बन्ला चीनको नयाँ राष्ट्रपति ? कसरी छानिन्छन् नेताहरु ?
काठमाडौं । हरेक पाँच वर्षमा हुने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनप्रति विश्वको नजर तानिन्छ । किनकि यसै महाधिवेशनले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व तय गर्छ, जसका हातमा कम्युनिष्ट पार्टीको कमाण्ड रहन्छ र उसले एक करोड चिनियाँ नागरिकमाथि शासन गर्दछ ।
[ Oct 18, 2017 ] सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अाएन, अब चुनाव सार्न कठीन !
काठमाडौं l प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि फरकफरक मतपत्र हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा दायर रिटप्रति सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने फैसला गरेको छ । आजको यो फैसला अनुसार मंसिर १० र २१ गतेका लागि…
[ Oct 18, 2017 ] यो वर्ष नगुड्ने भयो रेल, विभाग भन्छ– मन्त्रालयले चासो दिएन
काठमाडौं । २०७४ सालको अन्त्यसम्ममा नेपालमा रेल नगुड्ने भएको छ । रेल्वे विभागले २०७४ को अन्त्यसम्म रेल गुडाउने तयारी गरे पनि सरोकारवाला पक्षले गम्भीरता नदेखाएपछि तोकिएको मितिमा रेल नगुड्ने निश्चित भएको हो । “हामीले सम्पूर्ण तयारी…
[ Oct 18, 2017 ] लोकतान्त्रिक गठबन्धन निष्कृय : चुनावी तालमेलमार्फत राप्रपालाई १४ सिटमा सघाउने
काठमाडौं । अन्ततः नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन हुने भएको भनिएको ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ पूर्णता नपाउँदै निष्कृय भएको छ । गठबन्धनमा रहेको एक दल फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमै समाहित भएको तथा राजपा र संघीय समाजबादी फोरमले छुट्टै गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने…
[ Oct 18, 2017 ] सावधान ! पटाका पड्काउँदा हुन्छ यस्तो जोखिम
तिहारमा पटाका पड्काएर दीपावलीमा रमाइलो गर्ने चलन हामी धेरैमा हुन सक्छ । तपाईं पनि पटका पड्काएर दीपावली मनाउने योजनामा हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस्, पटाका पड्काउँदा धन त खर्च हुन्छ नै सुरक्षाको जोखिम पनि त्यतिकै उच्च हुन्छ । यसले वतावरण…
[ Oct 18, 2017 ] रोल्पामा ‘जनसत्ता' सशक्त बनाउने कसरत
रोल्पा । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव' नेतृत्वको नेकपाले रोल्पामा गठित ‘जनसत्ता' लाई सशक्त बनाउने कसरत गर्दैछ।नेकपाका महासचिव विप्लव तीन दिनअघि थबाङ पुगेका छन्।उनले थबाङी कार्यकर्ता र जनतासँगको भेटघाटलाई तीव्र बनारहेका छन्।स्थानीय तहको चुनावमा नेकपाका थबाङी नेता कार्यकर्ताले स्वतन्त्रबाट चुनाव…
[ Oct 18, 2017 ] उम्मेदवारको मनोनयन हुन ४ दिन बाँकी, किन अझै टुंगिएनन् दलहरुका उम्मेदवार ?
काठमाडौं । मंसिर १० गते पहिलो चरणमा हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावको मनोनयन गर्ने समय चार दिन मात्रै रहँदा पनि प्रमुख दलहरुले आफ्ना उम्मेद्वार टुंग्याउन सकेका छैनन् । चुनावकै मुखमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उम्मेद्वार मनोनयन प्रक्रिया प्रभावित हुने आंशका समेत बढेको छ ।
[ Oct 18, 2017 ] कांग्रेसका उम्मेदवारःदेउवा सरकार ढाल्नेदेखि मुख्यमन्त्रीका दाबेदारसम्म
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पहिलो चरणमा चुनाव हुने ३२ मध्ये ७ जिल्लाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार तय गरेको छ । मंगलबार बसेको संसदीय बोर्डको बैठकले ताप्लेजुङ,पाँचथर,सोलुखुम्बु,खोटाङ,मनाङ,हुम्ला र जाजरकोटमा उम्मेदवार तय गरेको हो ।कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार ताप्लेजुङमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा…
[ Oct 18, 2017 ] तिहारमा मिठाईको माग चार दोब्बर
काठमाडौं । मिठाई पसलमा भीड छ । साहूजीलाई कुरा गर्नु परैको कुरा, पैसा गन्नसम्म भ्याइनभ्याई छ । तिहार सबैभन्दा बढी मिठाई खपत गर्ने पर्व । नेपाल डेरी प्राइभेट लिमिटेडका निर्देशक अरनिको राजभण्डारीका अनुसार दसैं, तिहार, आमाको मुख हेर्ने…
[ Oct 18, 2017 ] यमपञ्चकको दोश्रो दिन, आज कुकुर तिहार
काठमाडौं । आज कुकुर तिहार । सबै नेपालीका घर आँगनमा कुकुरलाई टीका तथा माला लगाइदिएर मीठा–मीठा खानेकुरा खान दिई पूजा गरिँदै छ । यस दिन कुकुरको पूजा नगरी खाना खाएमा पापी भइन्छ भन्ने भनाइ छ । प्रत्येक वर्षको कात्तिक कृष्ण…